सर्वोच्चको फैसलामा कसले के भने ? – CentralKhabar – No 1 Online News Portal from Nepal
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : २८ असार २०७८, सोमबार १५:४६
सर्वोच्च अदालतको आजको संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेशको पक्षविपक्षमा जुहारी चलेको छ । राजनीतिकर्मी र नेताहरूबाट यसको समर्थन र बिरोधमा सामाजिक संजालदेखि सडकसम्म तात्न थालेका छन् ।
विभिन्न पार्टीका नेताहरूले आजको सर्वोच्चको पक्ष र विपक्षमा यसरी प्रतिक्रिया दिएका छन् :
ओली समूहलाई ‘खड्गप्रसाद ओली एण्ड कम्पनी’ को संज्ञा दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लागेका सबैलाई शुभकाना समेत व्यक्त गरेका छन्।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी र असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक रोकेको बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाबाट स्थिर सरकार निर्माण गर्न र प्रतिगमनकारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
काँग्रेस नेता गगन थापाले अदालतको आदेश मनपरेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले ट्वीट गर्दै लेखेका छन् , ” प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक थियो,सर्बोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै संविधानको रक्षा गरेको छ । अदालतको आदेश मनपरेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन।”
उनले उत्तेजना,दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् भन्दै कामना गरेका छन्।
एमाले नेता इश्वर पोखरेल सर्वोच्चको आजको फैसलालाई मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता निम्त्याउने षडयन्त्र भन्दै बिरोध गरेका छन् ।
पोखरेलले ” बुझे हुन्छ – आजको फैसलाद्वारा मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरताको दुन्दुभी बजाइयो …!यसका मतियारहरूले जे सुकै पगडी लगाए पनि इतिहासको कठघरामा अभियुक्त हुनैपर्छ ।” भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको सबै फैसला नमान्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थक सडकमा उत्रिएका छन् ।
अदालत राजनीतिसँग द्वन्द्वमा आएको बताउँदै महेश बस्नेतले उक्त निर्णयविरूद्ध युवा संघले आन्दोलन सुरू गरिसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा अदालतको होइन, राष्ट्रपतिको हो,’ उनले भने, ‘सदनमा बहुमत परीक्षणसम्म गर्नु भनेको भए ठिकै हुन्थ्यो।’
एमाले नेता विष्णु रिजालले ” सरकार आउने-जाने नियमित कुरा हो । हामी एमालेका लागि मुख्य कुरा हाम्रो पार्टी एकता हो ।” भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले टिप्पणी गर्दै लेखेका छन् , ‘ हिजो भएको सहमति अनुसार पार्टीलाई बचाउन सक्दा सदनमा देउवाको बहुमत पुग्दैन। एमाले नै निर्णायक रहन्छ । सदनमा पनि एमाले एक नम्बर, चुनावमा पनि एमाले एक नम्बर ! किनकि, चुनावको विकल्प छैन ।”